CHAMPIONS: Premier League Oo Shaaciyey Dabbaal-degga Ay U Diyaarinayaan Liverpool Iyo Xilliga Koobka La Siinayo - Gool24.Net
CHAMPIONS: Premier League Oo Shaaciyey Dabbaal-degga Ay U Diyaarinayaan Liverpool Iyo Xilliga Koobka La Siinayo
19/05/2020 Abdiwahab A. Abeye
Maamulka Premier League ayaa shaaciyey qorshaha dabbaal-degga ee ay u diyaariyeen kooxda kubadda cagta Liverpool marka loogu dhawaaqo inay tahay horyaalka xili ciyaareedka 2019/20.
Agaasimaha fulinta Premier League, Richard Masters ayaa ballan-qaaday in tababaraha Liverpool ee Jurgen Klopp iyo ciyaartoygiisa ay siin doonaan Koobka marka ay suurtogalka noqoto, laakiin aan taageereyaasha loo ogolaan doonin inay garoomada yimaaddaan si ay ula dabbaal-degaan.
Liverpool oo hoggaanka horyaalka Premier League ku guuleysigiisa ay uga hadhsan yihiin laba guulood oo kaliya ayaa waxa loo caleemo-saari doonaa horyaalka sannanadka markii ugu horreysay muddo soddon sannadood ah waxaana kaliya ka xiga in marka dib loogu soo laabto ciyaaraha ay labada kulan ee ugu horreeya badiyaan.
Tababare Jurgen Klopp iyo ciyaartoygiisa oo ku jiray waqti farxadeed oo ay iskugu diyaarinayeen in ay taariikhda ku galaan kooxdii waqtiga ugu degdegga badan ku hanatay horyaalka ayaa waxa hamigoodaas hor istaagay caabuqa Korona oo keenay in ciyaaraha la joojiyo muddo laba bilood iyo dheeraad ah, waxaanay hadda taariikhda ku geli doontaa kooxda waqtigii ugu dambeeyey oo noqonaysa badhtamaha bisha June hanata horyaalka Premier League.
Agaasimaha fulinta Premier League, Richard Masters oo la weydiiyey haddii ay Liverpool siin doonaan koobka iyo dabbaal-deg ayaa farxaddii ugu weynayd siiyey Klopp iyo ciyaartoygiisa, waxaanu yidhi: “Haddii ay suurtogal noqoto, haa. Waxaanu jecel nahay inaanu xaflad dabbaal-deg u samayno ciyaartoyda iyo shaqaalaha sida adag usoo shaqeeyey. Waanu isku dayi doonaa illaa ay suurtogal noqon u noqon weydo sabab ah walaaca badqabka.”
Maamuleyaasha Premier League oo kulan yeeshay Isniintii shalay, wada-hadal dheeraad ah kumay soo qaadin sida uu noqonayo maalinta ugu dambaysa ee horyaalka, waxaa se mabda’ ahaan la isla qaatay in tababarka lagu soo laabto kaddibna ciyaaruhu ku xigaan oo bisha June dib loo bilaabo.
Laakiin Masters waxa uu dabada ka riixayaa in labada kulan ee ugu soo horreeya ay noqdaan kooxaha kulamada dheeraadka ah u hadhsan yihiin, gaar ahaan in Arsenal ay safar ugu tagto Manchester City, sidoo kalena ay Aston Villa foodda geliso Sheffield United.
Afartan kooxood ayaa waxay haystaan kulan baaqi ah marka loo eego kooxaha kale, waxaanay xilligii naadiyada kale ciyaarayeen ay ku maqnaayeen finalkii Carabao Cup.
Si kastaba, warkan ayaa waxa uu farxad u yahay ciyaartoyda, tababaraha iyo jamaahiirta Liverpool ee wadnaha farta ku hayay labada bilood iyo dheeraadka ah, muddadaas oo dhegahooda ay kusoo dhacayeen warar qalbi jab ku ah oo u sheegayay inay suurtogal tahay in horyaalka waxba kama jiraan laga dhigo.